Efa tonga ao Toamasina ireo razana: novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ireo inspekitera telo lahy | NewsMada
Efa tonga ao Toamasina ireo razana: novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ireo inspekitera telo lahy
Tonga any Toamasina ny razan’ireo polisy telo lahy niharan’ny fitsaram-bahoaka tany Ambodihazinina Fenoarivo Atsinanana, omaly. Nisy ny “autopsie”, tsy mbola nisy ny fisamborana sy ny valifaty ataon’ny polisy, araka ny feo nandeha…
Tamin’ny 1 ora marain’ny alakamisy 25 oktobra no ningadona tao amin’ny biraon’ny sampandraharaham-paritany misahana ny filaminana anatiny ny delegasionan’ny polisy nitondra ny nofo mangatsiak’ ireo inspekitera telo lahy: Andriamahefantsoa Hanjarinafy Andrianasolo, i Nandrasana Briand Simon ary i Be Jacques Fidele Abdy. Ity farany taorian’ny fahatongavany teo amin’ny biraon’ny tale iraisam-paritra, efa noraisin’ ireo mpiray finoana aminy amin’ny silamo ka nentina tany amin’ny moske ary tany ny nampandroana azy taorian’izay. Nihazo an’ i Mahanoro avy hatrany fa tsy nisy fiandrasam-paty natao tao Toamasina. Ireo roa lahy sisa no afaka nijanona niandrasam-paty tao amin’ny efitrano malalaka amin’io toerana voalaza etsy ambony io.
Akory ny hatairan’ny rehetra taorian’ny fahatongavan’ny razana raha nahita ny fahavoazana ka samy niaiky fa tena novonoina tamin’ny fomba feno habibiana tanteraka ireo polisy telo lahy.
Raha ny hita amin’ i Abdy sy i Hanja manokana, notapahina ny tanany, potika tanteraka ny lohan’ izy roa lahy ary feno dian’antsy ny tenany iray manotolo. Nisy ny fanaovana “autopsie” tany Toamasina, omaly maraina, nanamarinan’ny dokotera fa tena novonoina tokoa ireto polisy ireto.
Mifamahofaho be ny raharaha
Raha ny voalazan’ny tale iraisam-paritry ny filaminana anatiny, ny kaomisera divizionera, Ramampiandry Nicolas, nilaza tsotra izao izy fa iraka ara-dalàna ary misy taratasy ara-dalàna ny nataon’izy telo lahy ireto fa misy mpandraharaha lavanila iray nametrahan’olona fitoriana ho mpividy vanila halatra ao an-toerana. Nirahina hisambotra ry zalahy. Efa nampiseho ny taratasy manambara ny iraka nampanaovina azy ireo ny sefo fokontany ry zareo ary nitondra teny amin’ny olona hanaovana fanadihadiana sy heverina hosamborina ny sefo fokontany. Tsy nanaiky ny fokonolona ary nambaran’ny sefo fokontany fa polisy ireo, olom-panjakana, saingy tsy nanaiky hatrany ny andian’olona.
Nanomboka ny savorovoro ka nafenin’ny sefo fokontany tao an-tranony ireo polisy nefa norobain’ny fokonolona marobe ny tranon’ity farany. Matin’izy ireo tao ny inspektera Hanja. I Briand kosa, niezaka nandositra ihany ka tratran’ny be no ho vitsy ary matin’ny olona ihany koa teny anaty alan-kafe. Tafaporitsaka ihany, efa tany amin’ny 5 km i Abdy, saingy niverina nihevitra ny hanavotra ny namany ary izao matin’ny fokonolona izao ihany koa. Tena nanamparan’izy ireo ny habibiana. Tokony ho tamin’ny iray ora antoandro avokoa izany rehetra izany no niseho. Mandeha ny famotorana, ary nilaza ny tale iraisam-paritra fa tsy nisy aloha ny fisamborana, tsy manao valifaty araka ny feo aely ny polisy. “Ny tohin’ny fanadihadiana no ahafantarana ny marina”, hoy ny fanazavana.